Okungajwayelekile | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Ibonisa ukunakekelwa kwe-loquat, indlela yokukhulisa izithelo ezingavamile
I-Medlar ayiyona isitshalo esithandwa kakhulu ezindaweni zethu, kodwa ezinye izithandani ezingathandeki zingathanda ukuyikhula. Izinhlobo ezimbili ezivame kakhulu ze-medlar - isiJalimane nesiJapane. Zakhula ezindaweni ezifudumele nezibhakabhaka ezimnene, kodwa ngenxa ye-thermophilicity ephezulu akusiyo njalo ukuyikhulela emhlabathini ovulekile.
I-Passionflower: ukunakekelwa okuphelele, izindawo zokuphulukisa kanye nezicelo zezokwelapha
I-passionflower iyisitshalo esimangalisayo esiyingqayizivele. Kungokomndeni we-Passion Flowers futhi kunezinhlobo ezingaphezu kwezingamakhulu ayisithupha. Lesi sivini esivuthiwe sikhula ezindaweni ezishisayo zaseMelika, e-Australia, e-Asia naseMedithera. I-passionflower akuyona igama elilodwa lesitshalo, libizwa nangokuthi i-passionflower, umphathi we-liana, inkanyezi yama-cavalier, izithelo zothando, i-granadilla, imbali yezinkanuko zeNkosi.
Ukukhuphula i-medlar efasiteleni, ikhaya eliyingqayizivele
I-Medlar iyi-green ever exotic. Ikhuluma ngokugcwele. Kunezinhlobo ezingaba ngu-30 ze-loquat, kodwa ekhaya, i-medlar ihlume kahle futhi ihluma. Uyazi? I-Medlar yaqala ukuhlakulela eJapane. Ekhaya lasekhaya lingakhula ngokuphakama ngamamitha ayi-1.5-2. Amaqabunga asitshalo anesibhakabhaka, esikhumba, esicwebezelayo phezulu, esezansi-evelele.
Indlela yokukhulisa i-kumquat ekhaya
Kubalimi abaningi, benesitshalo esisijabulisi iso kuphela, kodwa futhi sithwala izithelo, kungumqondo wokulungisa. Enye yalezi zitshalo ezithela izithelo, eziye zazuza ukuthandwa okukhulu kamuva - kumquat, isitshalo se-citrus esingakhula ekhaya. Uyazi? Ukuhunyushwa kusuka kumkhiqizo we-Chinese - "i-apula yegolide".
Iyini i-kumquat ewusizo futhi eyingozi, sifunda
Njalo ngonyaka izithelo eziningi ezingavamile zivela emashalofini ezitolo zethu, ngakho-ke i-kumquat (noma i-orange orange) isiye yaphela ukuba yinto entsha. Njengazo zonke izithelo ze-citrus, izithelo ze-kumquat zinezindawo eziningi ezizuzisayo, ezizoxoxwa ngezansi. Ukwakhiwa kwe-kumquat: iqoqo lamavithamini namaminerali. Ngaphandle, i-kumquat ifana nomxube we-orange nelamula.
I-Ananas: yiziphi izinhlobo nezinhlobonhlobo zezithelo zangaphandle ezihlukanisiwe
Njengoba uChristopher Columbus engxenyeni yeminyaka eyinkulungwane eyedlule kwakuyiYurophu yokuqala ukunambitha i-ananas, i-palette yemibala echaza lokhu kudla kwakuthandwa kakhulu. Kakhulukazi ukuthi kunezinhlobo ezingu-9 ezaziwa eziphayinaphu kanye nezinhlobonhlobo eziningi nezinhlobonhlobo. Khulisa bona ngenhloso yobuhle.
Indlela yokukhulisa i-papaya kusuka emakhaya ekhaya
Izitshalo ezingavamile ekhaya aziyona into emangalisayo, kodwa zisasazisa iso ngobuningi bazo kanye nemifino eluhlaza. I-Papaya ingenye yalezi zitshalo, ngokubukeka sengathi kufana nesihlahla sesundu esineziqabunga ezinkulu nezindala. Ngokwemvelo, ukuphakama kwalo kufinyelela kumamitha angu-10, ekhaya - kufika kumamitha angu-6 ukuphakama.
Utamatisi ezihlukahlukene "i-Malachite Box": izici, izinzuzo nezingozi
Ukutshala ama-daffodils nokunakekela emhlabathini ovulekile
I-giants elimnandi ensimini yakho iyinhlanzi enkulu yokusajingijolo: incazelo yezinhlobonhlobo, izici zayo nezindlela zokulima
I-conifers eyi-6 ehlanza ingadi yamagciwane